Ciidamada NISA oo soo Bandhigay Sawiradda Ninkii Waday Gaarigii Shalay ku Qarxay Suuq Bacaad (SAWIRRO) - Hablaha Media Network
Ciidamada NISA oo soo Bandhigay Sawiradda Ninkii Waday Gaarigii Shalay ku Qarxay Suuq Bacaad (SAWIRRO)
HMN:- Ciidamada Nabad sugida iyo Sirdoonka qaranka (NISA)ayaa maanta soo bandhigay sawiradda, nin shalay ay qabteen oo la sheegay inuu gaari qarax ka buuxo soo dhigay dhabarka danbe ee masaajidka Sheekh Cilmi oo ku yaala xaafadda Suuq Bacaad ee Degmada Yaaqshiid.
Sarkaal ka tirsan Hay’adda Nabad Suggida, oo warbaahinta u sheegay in ninkan uu xog badan siiyay Saraakiisha Nabad Suggida, isagoona sheegay inuu muhiim u ahaa weerarada iyo qaraxyada ay Shabaabku ka gaysan jireen Magaalada Muqdisho.
Sarkaalka Nabad Suggida ka tirsan oo codsaday inaanan magaciisa loo adeegsan warbaahinta ayaa yiri “Ninkan aad u jeedaan wuxuu inoo sheegay in qaraxyo badan oo ka dhacay Magaalada Muqdisho uu wax ka soo maleygay, sida wuxuu inoo sheegay inuu isagu dhigay Isgoyska Siinaay gaari 18-kii bishii August halkaasi la dhigay, isla-markaana ku qarxay.”
Sarkaalka ayaa waxaa kale oo uu yiri “Wuxuu kaloo ninkani cadeeyay markii aan waraysi dheer la yeelanay inuu isagu geeyay gaarigii qaraxa la soo saaray ee 25-kii bishii August lagu weeraray maqaaxida Banadir Beach ee Xeebta Liido, inkastoo qaraxaasi uu fashilmay, ninkii loogu talla-galay inuu is qarxiyana la qabtay.”
Waxaa layaab leh ayuu yiri sarkaalka, in ninkani uu xitaa inoo sheegay inuu kamid ahaa nimankii argagixisada UGUS ee 25-kii bishii June weerartay Hotelka Naasa Hablood, uuna waday gaarigii ay la socdeen ragaasi, isla-markaana uu halkaasi dhigay, ka dibna uu goobta ka cararay.”
Wuxuu sarkaalku intaasi ku daray in Macluumaad badan ay ka heleen dembiilahan ka tirsan UGUS, waxaan rabaa inaan idiin cadeeyo, in ninkani maalmaha soo socda Saxaafadda loo soo bandhigi doono si uu sharaxaad ugu bixiyo howlihii uu qaban jiray.
Sarkaalka ka tirsan mintidiinta Ururka Al Shabaab oo weli aan la shaacin magaciisa, ayaa waxaa da’diisa lagu sheegay inuu yahay 37 jir ka yimid Degmada Baraawe ee Gobolka Shabellaha Hoose.